iWave Rock Cottage-Iimvubu (ekufutshane neWave Rock) - I-Airbnb
iWave Rock Cottage-Iimvubu (ekufutshane neWave Rock)
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguSue
Izindlu zethu zasemaphandleni zise-1.5kms ukusuka kwisiseko seWinds Rock kufutshane neLake Magic kunye neSalt Pond. Ngamagumbi amabini okulala, igumbi lokuhlambela elinye, izindlu zasemaphandleni ezinegumbi elaneleyo losapho okanye abantu abathandanayo abafuna ukuzikhupha ngelo xesha.
Iindawo ezininzi ezinomtsalane zikumgama okufutshane nendlu yakho esemaphandleni.
Ngokuhlala nathi ufumana imoto esimahla edlula kwi-Winds Rock nezinye iindawo ezinomtsalane kule ndawo nokungena simahla kwiSalt Pond yethu.
Ukusuka kwizindlu ezisemaphandleni, uyakwazi ukonwabela indawo ethe cwaka engqonge ichibi elinetyuwa, iLake Magic, ipuli yethu enetyuwa kunye nazo zonke iintlobo zamatye endalo kule ndawo. Hamba ngebhayisekile okanye uhambe ngebhayisekile ukuze ujikeleze iindlela.
IDwala Lamaza likwiikhilomitha eziyi- ukusuka ePerth (Iiyure eziyi-3 ukuya kweziyi-4 xa uqhuba) Kukho izinto eziliqela onokuzibona eziquka iRock ngokwayo, iiHumps, iMulka 's Cave, iMiniature Toy Solider Museum, iNgqokelela Yezilwanyana Zasendle, iPaki Yezilwanyana Zasendle kunye neMyuziyam yePioneer.
4.69 · Izimvo eziyi-213